WASIIRKA SHAQO-GELINTA, ARIMAHA BULSHADA IYO QOYSKA MARWO HINDA JAMA HIRSI GAANI: MUUNAD KA SO DHEX BAXDEY XUKUMADA MADAXWEYNE MUUSE BIIXI CABDI. - Guuguule News Network
Wasaarada Shaqogelinta Arimaha Bulshada iyo Qoysku Maanta waxay Noqotay Wasaarada ugu dardarta iyo shaqada badan uguna dhaqdhaqaaqa badan Wasaaradaha taasina waxay horseed u ah Wasiirka Wasaarada Marwo Hinda Jamac Hirsi Gaani oo runtii hadaanu nahay bulshada reer Somaliland markhaati cad ka nahay dedaalka, hawl karnimada ay daacadnimadu ku dheehana tahay ee ay leedahay uguna adeegayso bulshada qaybaheeda kala duwan ee masuulka ka tahay xilkana u hayso.
HADABA: Mudadii ay joogtey Marwo Hinda Jamac waxay ku talaabsatey horumarweyn kana samaysay wasaarad ahaan, waxayna ku dhiiratey iney daboosho intii karaankeeda ah baahiyaha kala duwan ee bulshada Iyadoo sameysay Maamul daadejin abuurteyna waaxo u adeega bulshada si loo yareeyo baahiyaha waxna loogu qabto dadka reer Somaliland ee Masuulka u tahay. Wasiir Hinda Jamac Hirsi iyadoo ah qof haween ah waxay hadana noqotey “Muunad”ka dhex Muuqata dawlada uu ino soo dhisay Madaxweynaheena Muuse Biixi Cabdi. Hadaanu nahay Bulsho weynta reer Somaliland waxay si buuxda ugu taageersanahy uguna Mahadcelinaynaa Madaxweynaha Qaranka Somaliland inuu keenay ciddi ku haboonayd.
kana soo baxdey waxqabadkii Wasaarada Shaqo gelinta, Arimaha Bulshada iyo Qoyska mudadaa yar e Sanadka ah. Dadka Reer Somaliland Maanta waxay u bisil yihiin inay qiimeeyan Madaxdooda iyagoo aan ka eegaynin dhinaca qabiil iyo qof jeclaysinimo kuna qiimaynaaya keliya wax qabadka wixii loo igmadey masuuliyiintu ma ka soo baxeen taasina waa taan maanta ku qiimeynay Marwo Hinda Jama anagoo ku eegayna indho caafimaad qaba oo ka madhan qabiil iyo nin jeclaysi. Waxaanu arkaynaa waxqabadka iyo dedaalka wasiirka Hinda sida hagar la’aanta ah ugu heelantahay bulshadeeda hadh iyo habeenba. Iyadoo kor u qaadey: Shaqaaleysiinta, Shaqo Abuurka, Cadaalad u Helida Dadka Shaqaalaha ah ee Xaqooga la Duudsiiyo, Ururinta iyo Wax u qabadka Dadka Jilicsan sida Derbi Jiifka, kor u qaadida dhinac walba inay wax Noqdaan Dadka Naafada ahi sida inay helaan Shaqo, Waxbarasho,Caafimaad iyo Taakulaynba. Marwo Hinda Jama Hirsi (Gaani): Waa shaqsi ku qaabisha dadkeeda u debecsanaan hambalnimo ah dadkuna iskugu mid yihiin mar walbana gaadhi karaan xafiiskeeda cidii u baahani. Aan lahayn iska waynaysiin.
Una dheertahy caawinta qof kasta oo dhibaato ka cabanaya inay wax la qabato intii karaankeeda ah waana astaamaha hogaamiyenimo oo ku yar runtii Madaxda aduunka. Bulsho ahaan waxaanu markhaati cad ka nahay Wasiirka Shaqo Gelinta, Arimaha Bulshada iyo Qoyska Marwo Hinda Jama Hirsi Gaani iney tahay qof daacad ah hawl karnimo, aqoon ay ku dheehan tahay leh. Abaalkeedana waxa Ka Markhaati kici doona cid kastoo dan ka leh Qaranimada, horumarka iyo inaynu meel sare gaadhno.
Madaxweyne waxaanu marlabaad kuugu mahad celinaynaa inu Alle ku Waafajiyey inaad u Magacowdey Wasaaradaas cidii ku habooneyd bulshadana dan u ahayd.
Alle ha ka abaal Mariyo Masuul kasta oo ka Mida Xukumadeena oo Bulshadiisa ugu adeega Daacadnimo sida Wasiiradaas Marwo Hinda Jama. Allaa Mahad Leh Eng Abdirahman Adem Ahmed Abdirahman1414@gmail.com 0634482089